🐬 " ရခိုင်အရေး - ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ? 🐬 - Eureka Myanmar |
Home Article Political 🐬 " ရခိုင်အရေး - ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ? 🐬
🐬 " ရခိုင်အရေး - ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ? 🐬
Eureka Myanmar June 12, 2018 0
မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ဒေသပဋိပက္ခမှစသောအရေးကို “အရေးမကြီး” ပါဟုတော့မည်သူမျှပြောကြလိမ့် မည်မဟုတ်။ သို့သော်လည်း မည်မျှလောက်အရေးကြီးပြီး မည်မျှလောက်အန္တရာယ်ကြီးမားသည်ကိုတော့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလေ့လာမှုအရ တူညီကြမည်မဟုတ်။ နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်များဆိုင်ရာလေ့လာမှုကို လူတိုင်း လက်လှမ်းမှီကြသည်မဟုတ်ရာ စိတ်ဝင်စား၍လေ့လာကြသူများ၊ ပညာရှင်များကလောက်သာ မည်မျှအန္တ ရာယ်ရှိသည်ကို စိုးရိမ်နေကြရပါ၏။
နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ကြသူများ၏နိုင်ငံရေးပညာနည်းပါးမှု၊ လုံလောက်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုတို့မရှိ ကြ၍ဖြစ်သည်ဟု အတိုချုပ်ရေးရပါလိမ့်မည်။ အတော်ပင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးပါးလည်းဝ၊ အာဏာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုလည်းကျွမ်းကျင်လှပါသည်ဟုဆိုသော ယနေ့ဆီးရီးယားအာဆတ်သည်ပင် နိုင်ငံကိုလက်မ လွှတ်ရရုံတမယ်၊ ဆီးရီးယားကတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ကြေသွားခဲ့လေပြီ။ သူ့လောက်ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်သောအီရတ်၊ အီဂျစ်တို့ အစိုးရအဖုံဖုံပြောင်းသွားခဲ့ကြပြီ။ နိုင်ငံလည်းပွစာကြဲသွားခဲ့သည်ကို အထူးသတိထားသင်ခန်းစာ ရယူနိုင်ရန်လိုသည်။
🐬 ပညာရှင်များဆွေးနွေးပွဲမှာဘာတွေပြောသွားခဲ့ကြသလဲ ?
( ၉. ၆. ၁၈ ) နေ့ ဟိုတယ်ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောသေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့၏ “ရခိုင် ပြည်နယ်အရေး၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအမြင်” ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင် -
- ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ် (သမ္မတဦးသိန်းစိန်အကြံပေးဟောင်း)၊
- ဒေါက်တာအင်ဒရူး (ဥပဒေပညာရှင်)၊
- ဒေါက် တာရန်မျိုးသိန်း (နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ)
...... တို့ (၃) ဦးမှဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မူလက (၄) ဦးစီစဉ်ထားသော် လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ဦးမှာမတက်ရောက်နိုင်ဟုဆိုသည်။
သေနင်္ဂဗျူဟာတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦး မှာ စာရေးသူထံတွင် Master တက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ Ph. D Candidate တစ်ဦးလည်းဖြစ်နေ၍ မရောက်ရောက် အောင်သွားခဲ့ရပါ၏။ ယခင်ကလည်း အကြမ်းဖက်တို့၏အန္တရာယ်မည်မျှကြီးမားပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုအဖွဲ့ ကပင် ပွဲတစ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့အားလေးနှင့် ကြိုးစားခဲ့ပါသော်လည်း နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများအ နေဖြင့် လုပ်မှားကိုင်မှားဆက်တိုက်ဖြစ်နေရသည်မှာ အတော်ပင်မချင့်မရဲဖြစ်စရာပင်။
* နိုင်ငံတကာဖိအားကိုလိုက်လျောခဲ့လျှင် ပြဿနာပြေလည်
သွားမည်ဟူသော သဘောတရား (Concept) ကအဆုံးအဖြတ်
* နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့်တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောသင့် သည်
ဟူသောစိတ်ထား (Attitude) ရှိနေသာကြောင့်လား ?
နိုင်ငံတကာဖိအားကိုလိုက်လျောတိုင်း ပြဿနာမပြေလည်ပါဟု အတိအလင်းရေးရပါလိမ့်မည်။ အ ကြောင်းရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာပါလျှင် အသားလို၍အရိုးတောင်းသော စနစ်တကျ အစီအစဉ်တကျ စီမံထားသော (Planned and Organized Event) ဖြစ်နေသောကြောင့် နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှု၊ ဖိအားများကို မည်မျှလိုက်လျောသည်ဖြစ်စေ ပြဿနာမပြေလည်နိုင်ပါဟု ရေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။
လိုက်လျောလျှင် ပြေလည်မည်ဟူသောစိတ်ထားမျိုးရှိခြင်းကတော့ အဆုံးအဖြတ်ပေးသူ၊ တာဝန်ရှိ သူနှင့်သာသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူကျင်လည်ခဲ့ရသောဘဝ၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရသောဘဝမှ အတွေ့အကြုံပညာ ဖြင့်သာသက်ဆိုင်ပါ၏။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာအားနည်းခဲ့လျှင်မူ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိရပါလိမ့် မည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ပညာရှင်များရှိနေပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများ အများအပြားရှိနေပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက အားလုံးကိုအကုန်အစင်မသိနိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ယူအသုံးပြုကြရမည်ချည်းဖြစ်ပါ၏။
ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်မှစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမှစေလွှတ်သော အ ဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကုလလက်အောက်ခံအေဂျင်စီများ၏အကြောင်းကို အူမချေးခါးမကျန်သိသူ ဖြစ်ပါ၏။ ဖိစီးတတ်သောအေဂျင်စီများရှိသလို၊ ကောင်းသောအေဂျင်စီအချို့ကိုလည်းရှင်းပြသွားသည်။ ဖိ စီးသောအေဂျင်စီများဝင်ရောက်ခဲ့သောနိုင်ငံများတစ်ခုမှမကောင်းခဲ့။ ပေါ့မည်ဟုယူဆပြီး ကြောင်ရုပ်ထိုးခဲ့ ကာမှ ဆေးကြောင့်လေးသွားသည့်နိုင်ငံများသာဖြစ်သွားကြောင်းကိုအဓိကထောက်ပြခဲ့ပါ၏။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်လာမည့် ကုလအေဂျင်စီများသည် ဖိစီးမှု၊ ကောင်းကျိုးမပြုသော အေဂျင်စီများဖြစ်၍ သတိထားရန်၊ လိုက်လျောရန်မလိုကြောင်း အဓိကဆွေးနွေးသွားပါ၏။ သူမက နိုင်ငံ တစ်ခုကိုဥပမာပေးခဲ့သည်။ အစ္စရေးလ်ကို UN Resolution အများအပြားချမှတ်ခဲ့ကြောင်း (ဆုံးဖြတ်ချက်) သို့သော်လည်း အစ္စရေးလ်သည်မလိုက်နာခဲ့ကြောင်း ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုလွန်ကဲစွာ ကြောက်ရွံ့ရန်မလိုကြောင်း အဓိကပြောသွားပါ၏။
ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ် အဓိကထားဆွေးနွေးသွားသည့်နောက်တစ်ချက်က “နိုင်ငံတကာစံနှုန်း” ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း (၂ဝဝ) ခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံတိုင်းသည် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်စံနှုန်းနှင့်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုချမှတ်၍မရကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းမရှိကြောင်းကိုထောက်ပြ သွားခဲ့သည်။ မှန်လည်းမှန်ပါပေသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်သာလိုက်လျောလွန်း၍ “ရောင့်တက်နေကြပြီး၊ အစ္စရေးလ်လို အဆိပ်ပြင်း သောနိုင်ငံငယ်လေးကိုမူ ကုလသမဂ္ဂကအသံဖြင့်သာဆိုရဲပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏သဘောကောင်းမှု ကို ကောင်းစွာသိကြသဖြင့် အသေးအမွှားကအစ “လူ့အခွင့်အရေး” ဗန်းပြ၍အထွန့်တက်ကြပါ၏။
အရှေ့အ လယ်ပိုင်းတွင် မိန်းမကားမောင်းခွင့်မရှိသော နိုင်ငံများရှိနေပါသည်။ ယေရှုဓာတ်ပုံကိုသော်လည်း ကောင်း၊ ဗုဒ္ဓပုံတော်ကိုလည်းကောင်း ယူဆောင်ခွင့်မရှိကြပါချေ။ သူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သူ့စံနှုန်းဖြင့်ဖြစ်၍ အပြစ်မပြောလို ပါ။ “စံနှုန်း” မရှိခြင်းကိုသာထောက်ပြလိုပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် အခြားနိုင်ငံများက သူ့နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု၊ သူ့စံ နှုန်းကိုသာလိုက်နာကြရလျှက် အဘယ့်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကျမှ ကိုယ့်စံနှုန်း၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို မျက်ကွယ် ပြုပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဟု တွန်းအား၊ ဖိအားများပေးနေကြရပါသနည်း ?
- လိုက်လျောတတ်သည်ကိုသိ၍ တိုး၍တောင်းဆိုခြင်းသာဖြစ်၏။
ချင်းလူမျိုးဖြစ်၍ သူ့နာမည်ကမရင်းနှီးလှ၊ သူ့ကိုဒေါက်တာအင်ဒရူးဟုသာခေါ်ပါသည်။ သူကလည်း ဥပဒေရှု ထောင့်မှ ကောင်းစွာရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ICC ဝင်နိုင်ခြေရှိ - မရှိ၊ သာမန်အားဖြင့် Rome Statue ကိုလက်မှတ်မထိုးထား၍ ICC တင်ရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၁ဝဝ% စိတ်ချပြီး “ကျယ်၍တော့မရ” ဟုသတိပေး ထားပါသည်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်မှုကို အမေရိကန်တွင် မည်မျှဖြတ်သန်းရကြောင်း သူ့အတွေ့အကြုံကို မျှ ကြပါ၏။
ဒေါက်တာအင်ဒရူးအနေဖြင့် အဓိကထောက်ပြသွားသည်။ Privilege ဟူသော “အထူးအခွင့်အ ရေး” သည် Right ဟူသော “ရပိုင်ခွင့်” မဟုတ်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ Citizen Right ဟူသည်မှာ နိုင်ငံ သားတစ်ဦး၏ “ရပိုင်ခွင့်” သာဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလီများမှာ ၁၉၈၂ ဥပဒေအရသာစစ်ဆေးခံပြီးမှ တစ်ဆင့်တက် လှမ်းကြရန်သာဖြစ်ပြီး တစ်ခါတည်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို မရရှိနိုင်သေးဟူသောအချက်ကိုထောက်ပြ သွားသည်။
ယနေ့ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှလည်းကောင်း၊ အခြားကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံအချို့မှလည်းကောင်း တောင်း ဆိုနေကြသည်မှာ . . . ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသောဘင်္ဂလီတိုင်းကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးရမည်ဟူသော "Right" (ရပိုင်ခွင့်) ကိုတောင်းဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ဤအချက်ကိုအလေးအနက်ထားသိရှိသင့်ပြီး နိုင်ငံတကာကိုတုံ့ပြန်သင့်ပါ၏။ အမေရိကန်တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်အောင်မြင်ခဲ့သည့်တိုင် အစိုးရမှအကြောင်းပြ ချက်မပေးပဲ ငြင်းဆိုခွင့်ရှိနေသော “အခွင့်” ကိုအစိုးရမှကိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါ၏။
နိုင်ငံတကာလေ့လာသူအဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပညာရပ်အတော်ဆန်ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသည် နှင့် အတန်ငယ်လွဲချော်နေသည်ဟုယူဆပါ၏။ သူဆွေးနွေးသည်က ပြည်တွင်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ကိစ္စ၊ ယခုစကားဝိုင်းခေါင်းစဉ်က နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့် အန္တရာယ်ကိုမည်သို့ရင်ဆိုင်မည်ဟူသောကိစ္စဖြစ်နေ ပါ၏။
ယခုအချိန်သည် ပြည်တွင်းကိစ္စထက်ပို၍အရေးကြီးနေပြီး ခေါင်းပေါ်ရောက်လာတော့မည့် “တုတ်” ကိုမည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟူသောအခြေအနေဖြစ်နေပါ၏။ ပြည်တွင်းကိစ္စထက်ကျော်လွန်၍ ကျရောက်လာမည့်အန္တရာယ်ကိုအကောင်းဆုံး၊ အသက်သာဆုံးထိခိုက်မှုမရှိအောင် မည်သို့တုံ့ပြန်ကြရမည် ဟူသောအခြေအနေဖြစ်ပါ၏။ ပြည်တွင်း၌ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် “ဘာကြောင့်” ဟူသော Blame Game ကို ဆွေးနွေးနေရတော့မည့်အခြေအနေမဟုတ်ပါချေ။
ပထမတဖြတ် (၃) ဦးဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ၏။ “ဒုတိယတဖြတ် (၃) ဦးဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ၏။ မေးခွန်း များကိုစင်မြင့်ပေါ်မှ ပညာရှင်များကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။ နိုင်ငံတကာအရေးဖြစ်လာ၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ကဏ္ဍကအရေးပါ လာပါ၏။ တစ်ဖက်တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီနာက နိုင်ငံတကာကိုလှည့်၍ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံ ရေးကိုအရယူကာ မြန်မာကိုဖိအားပေးနေပါသော်လည်း မြန်မာဘက်မှတုံ့ပြန်မှုကိုမတွေ့ရချေ။
ဟာစီနာသည် နောက်ဆုံး G-7 အစည်းအဝေးကိုတက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်တိုင် မြန်မာကဖိအားလျှော့ပါရန် “နားလည်မှုစာချွန်ကိုသာ လက်မှတ်ထိုင်ထိုး” အဆင့်ဖြစ် နေရာ Passive ဖြစ်လွန်းနေသည်ဟု မိမိကထောက်ပြခဲ့သည်။
တုံ့ပြန်မှု (Reactive) ၊ ဖြစ်လာမှတုံ့ပြန်မှုထက် ကြိုတင်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးယူသော (Proactive) ဖြစ်ဖို့ကောင်းကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီအရေးတွင် မြန်မာသည် Defensive (ခံစစ်သက်သက်) ဖြစ်လွန်းနေ ကြောင်း၊ ခံစစ်ဟူသည်မှာ အများဆုံး “သရေ” ကိုသာမျှော်လင့်နိုင်ပြီး အများစုမှာအရှုံးနှင့်သာရင်ဆိုင် တတ်ရသည်ဖြစ်၍ မြန်မာသည်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် ပုံစံပြောင်းသင့်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါ၏။ ဘင်္ဂ လားဒေ့ခ်ျဝန်ကြီးချုပ်၏ဆောင်ရွက်မှုများက (Proactive and Dynamic) ဖြစ်နေပြီး၊ မြန်မာကတုံဏှိဘာဝေ အခံသက်သက် (Passive) ဖြစ်လွန်းသဖြင့် (၂) နိုင်ငံတွင် အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်မှုမှာ အလွန်အမင်းကွာခြား နေပြီး ထိုအကွာအခြားက မြန်မာနိုင်ငံကိုနစ်မွန်းပျက်စီး စေရာဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
“ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တရုတ်ကရောနေမည်လား၊ နှစ်ဖက်မဆုတ်တန်းစစ်ဖြစ်ကြလျှင် နိုင်ငံပျက်စီးသွား မှာဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဖက်ဆုတ်၍ - တစ်ဖက်မဆုတ်လျှင်ပင် နိုင်ငံပဲ့ပါသွားသည်အထိ ကြိုတင်မျှော်လင့်စဉ်းစား ထားသင့်ကြောင်း” စာရေးသူမှဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တအိအိနှင့်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
အသားလိုသောကြောင့် အရိုးတောင်းသည့်ပွဲဖြစ်ရာ မည်မျှပင်လိုက်လျောသည်ဖြစ်ပါစေ။ ယခုပြ ဿနာပြေလည်သွားမည်ဟုမရှုမြင်ပါ။ အနောက်အုပ်စုမှတရုတ်ထိန်းချုပ်ရေးက သူတို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သဖြင့် တရုတ်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအကြောင်းမှန်သမျှကို အသုံးပြုသွားပါလိမ့်မည်။
တောင်းသမျှလိုက်လျောလျှင် ဘင်္ဂလီတစ်သန်းခန့်ကို လက်ခံလိုက်ရသည်သာအဖတ်တင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံမတည်မငြိမ် ပျက်ပြားမှသာ တရုတ်ထွက်ပေါက်ပိတ်နိုင်မည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံမပျက်သရွေ့တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်တင်းရုံမျှဖြင့် ပြဿနာမပြီးနိုင်ဟူသောအတွေးအခေါ်ကို သဘောပေါက်ထားနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံး သောပြန် လည်တုံ့ပြန်ရမည့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟုသာသတိပေးလိုပါသည်။
(၁၁. ၆. ၁၈) (၂ဝ၆၅)
Tags: Article Political